Taliyaha ciidamada Booliska oo magacaabay taliyeyaal cusub
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa magacaabay Saddex Taliyaal cusub ee ciidamada booliska ah. Taliyaasha cusub ee la magacaabay ayaa waxa ay taliyaal ka noqonayaan saldhigga Booliska garoonka diyaaradaha, Akademiyada Ciidanka boliiska iyo Taliyaha ciidanka Miino Baarista Booliska. Taliyaha saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa loo magacaabay Cabdifitaax […]
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa magacaabay Saddex Taliyaal cusub ee ciidamada booliska ah. Taliyaasha cusub ee la magacaabay ayaa waxa ay taliyaal ka noqonayaan saldhigga Booliska garoonka diyaaradaha, Akademiyada Ciidanka boliiska iyo Taliyaha ciidanka Miino Baarista Booliska. Taliyaha saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa loo magacaabay Cabdifitaax [&#8230;]